Howlgal Dad Lagu Qabqabtay oo Laga Sameeyey Gaalkacyo – Goobjoog News
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya howl-gallo ciidamada ammaanka ay xalay ka sameeyeen magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug.
Howl-galkaan waxaa si wadajir ah u sameeyey ciidamada maamullada Galmudug iyo Puntland oo kaashanaya ciidamada sida gaarka ah u tababaran Danab ee dowladda federaalka Soomaaliya ee ay geysay magaaladaasi.
Saraakiisha horkaceysay howl-galladaasi ayaa sheegay in u jeedkooda uu ahaa xaqiijinta amniga Gaalkacyo, iyadoona baaritaano laga sameeyey koonfurta iyo waqooyiga magalada.
Sidoo kale waxa ay saraakiisha intaasi ku dareen in baaritaanadaasi lagu soo qab-qabtay dad badan oo looga shakiyey inay xiriir la leeyihiin Al-Shabaab oo inta badan weeraro iyo dilal qorsheysan ka fulisa magalada Gaalkacyo
Maalin ka hor ayey aheyd markii magaalada Gaalkacyo lagu toogtay nin hubeysnaa oo la sheegay inuu Al-Shabaab u qaabilsanaa gobolka Mudug, halka mid kale oo ganacsade ahaa balse lagu eedeeyey inuu xiriir lalaaha ninka la dilay lagu qabtay guri ku yaalo koonfurta Gaalkacyo.
Taliska Xoogga Dalka oo Sheegay in Gacanta Lagu Dhigay Qaraxyo
FAALLO:- Madaxweyne Farmaajo Oo Ka Baqaya In Mudaaharaadkii Lagu Soo Dhaweeyay Mid La Mid Ah Lagu Sagootiyo?
SOOMAALIYA UMA BAAHNA 'SIYAASADDA WAAWEYNKA'